အိန္ဒိယတွင်အဖြူရောင်နောက်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့ PADE ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ
ပို့ကုန် oriented အရည်အသွေး coated duplex ဘုတ်အဖွဲ့
အဖြူရောင်နောက်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူ
Spento Papers India LLP 21 ရာစုတွင် coated duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက်ရုံများသို့ဖြိုခွဲခဲ့ပြီးတိုတောင်းသောကာလအတွင်းကြာချိန်တွင်ဂုဏ်သိက္ခာကိုမနာလိုစေရန်. ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုတင်သွင်းမည့်အစားကုမ္ပဏီသည်စက္ကူစက်ယန္တရားများရှိနိုင်ငံခြားရှေ့ဆောင်များထံမှအပြေးအလွှားအပြည့်နှင့်စက်ကိရိယာများကိုတင်သွင်းခဲ့သည်. လုံးဝအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းသည်စက္ကူဘုတ်အဖွဲ့များ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေပြီးထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ကြီးမားသောကြီးကြပ်မှုအတွက်နေရာချထားရန်စီစဉ်ထားသည်. Spento အဖြူရောင်နောက်ကျော duplex ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်စာတမ်းများထုတ်လုပ်သည်. Spento အိန္ဒိယနှင့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်အဖြူရောင်နောက်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုထင်ရှားသောထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်သည်. ထို့အပြင်၎င်း၏ရူပါရုံသည်0ယ်ယူသူအားအကောင်းဆုံးတပ်ဆင်ထားသည့် Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူများနှင့်ပရီမီယံ Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်.
Duplex ပျဉ်ပြားများသည်အနှစ်သာရအားဖြင့်ကတ်ထူပြားသို့မဟုတ်စာရွက်တစ်ရွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကနှစ်ခုအလွှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါကြောင့်ဟုခေါ်ကြသည်.
အဖြူရောင် Back Duplex ပျဉ်ပြားများကိုအဖြူရောင်အပြင်ပန်းနှင့်အတွင်းပိုင်းအလွှာများဖြင့်ဖန်တီးထားသည်. တောက်ပသောအဖြူရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများဖြင့် coated, ၎င်းသည်တောက်ပသောအသွင်အပြင်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။. နာမည်အပြည့်အဝထုတ်ကုန်အဆုံးထုတ်ကုန်, ဆိုတဲ့အမည်မှာအဖြူရောင်အပျိုစင်မဲ့စွန့်ပစ်ပျော့ဖတ်မှထုတ်ယူသည်.
White Back Duplex ဘုတ်အဖွဲ့၏အင်္ဂါရပ်များ
မြင့်မားသောတောင့်တင်း - ၎င်း၏ Multilayered ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်အဖြူရောင်နောက်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့သည်အလွန်တင်းကျပ်ပြီးအသုံးပြုမှုတွင်အလွန်တင်းကျပ်ပြီး၎င်း၏ application သည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ထုပ်ပိုးမှုအတွက်အဆင်ပြေစေသည်.
ချောချောမွေ့မွေ့ - ၎င်း၏ချောချောမွေ့မွေ့သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်သောပုံနှိပ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်လိုချင်သောဒီဇိုင်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်. ထို့အပြင် Shine သည်ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုမှုအတွက်ပရီမီယံကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်.
ရေခုခံ - coated အပြင်ဘက်တွင် Premium Sheen ကိုပေးရုံသာမကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောတန်ဖိုးကိုလည်းပေးသည်။.
ဖုန်မှုန့် - အုတ်မြစ်များသည်ဖုန်မှုန့်များကိုဤဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နေရန်ခွင့်မပြုပါ.
လိုက်လျောညီထွေပုံနှိပ်ခြင်း - ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အင်ဂျင်နီယာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သည်.
ကြာရှည်ခံမှု - ဖုံးအုပ်ထားသော duplex board စာတမ်းများ၏အကြီးအကျယ်အလွှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကြမ်းတမ်းပြီးမသင့်တော်သောအသုံးပြုမှုကိုကြိုးစားလေ့ရှိသည်.
ခေါက် - duplex board စာတမ်းများသည်မည်သည့်ပုံသဏ္ for ာန်ကိုမဆိုပုံသဏ္ for ာန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံသဏ္ဌာန်သို့မဆိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။.
White Back Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ရှစ်အဆင့်ဖွဲ့စည်းမှု - စာတမ်းများ၏ Multileveleveled ဖွဲ့စည်းမှုကိုတင်သွင်းသောပျော့ဖတ်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုပါ.
ပြန်လည်အသုံးပြုစက္ကူပျော့ဖတ်ကနေလုပ် - Spento စာတမ်းများကတာ0န်ယူမှုရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းများကအဖြူရောင်နောက်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့များအတွက်အသုံးပြုသောကုန်ကြမ်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးပြန်လည်အသုံးပြုသည်.
ဂေဟစနစ်သက်ရောက်မှု - ခေတ်ပြိုင်နည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများနှင့်တည်ငြိမ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအရည်အသွေးမြင့်မားစွာထားရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်သဘာ0သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်.
အစားအစာအဆင့်အတည်ပြုထုတ်ကုန် - ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဂေဟဗေဒနှင့်သဟဇာတဖြစ်နေသောလုပ်ငန်းခွင်အလေ့အကျင့်များကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်ဘုတ်အဖွဲ့စာတမ်းများကိုအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်အသုံးပြုရန်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်.
ယူနီဖောင်းအပေါ်ယံလွှာ - ထုတ်ကုန်၏အပေါ်ယံပိုင်းသည်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အတွက်ပင်ဖြစ်သည်.
White Back duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူ application applications များမှာကျယ်ပြန့်ပြီးအွန်လိုင်း0န်ဆောင်မှုများမြင့်တက်လာခြင်း,. application များ၏ areas ရိယာအချို့တွင်ဆေးဝါးများ, အဝတ်အထည်များ, ပွဲစဉ်အကွက်, အရည်ထုပ်ခြင်း, အစားအစာထုပ်ပိုးခြင်း, အစားအစာထုပ်ပိုးခြင်း,.